Xayeysiisyada iyo Qoraalada la kafaalo qaaday - Study Abroad Nations
Ma rabtaa in maqaalkaaga lagu daabaco bartayada? Waa kuwan tilmaamo kooban oo la raaco.
Waxaan aqbalnaa maqaalada kaliya mowduucyada xiisaha u leh akhristayaashayada taas oo ku saabsan waxbadan oo ku saabsan Waxbarashada, Shaqooyinka, Socdaalka / barashada dibada iyo adeegyada la xiriira ardayda.
Banner iyo xayeysiisyada tijaabada ah, waxaan haynaa qodobbo ku saabsan dhammaan xayeysiisyada oo leh qiime kala duwan.
Isticmaal foomka hoose si aad noola soo xiriirto ama iila toogto fariin gaar ah oo deg deg ah adoo adeegsanaya eduokpara@gmail.com
Qoraalada la isboonsar gareeyay iyo xayeysiinta
La hadal kooxdayada. Waxaan bixinaa xayeysiisyo banner ah oo cabbir kasta leh oo heerar kala duwan ah waxaanan sidoo kale aqbalnaa qoraallada la kafaalo qaaday. FIIRO GAAR AH: Boosashadu waa inay la xiriirtaa waxbarashada iyo ama waxbarashada dibadda. Dalabyadayadu waxay ku bilowdaan ugu hooseeya $10.
Ma matashaa hay'ad?
Haddii aad wakiil ka tahay hay'ad, noo sheeg magaca iyo goobta.